काेराेनाकाे मृत्यु संख्या सम्बन्धि केही भ्रमहरू - Khabarshala काेराेनाकाे मृत्यु संख्या सम्बन्धि केही भ्रमहरू - Khabarshala
काेराेनाकाे मृत्यु संख्या सम्बन्धि केही भ्रमहरू
के कोरोना साच्चिकै हामीले सोचेकै जस्तो खतरा छ त?
के यो लागेपछि सबैले मृत्युवरण गर्नु पर्ने हो त?
हो यो सत्यता हो कोरनालाई सामान्यरुप मा हेर्न मिल्दैन किनकी यो यति खतरापूर्ण छ कि सजिलैसँग एक अर्कोमा सर्दिन्छ। न यस्ले बुढाबुढी भन्छ न नाबालक कसैलाई छोड्दैन। एकजनालाई भयो भने सतर्कता नअप्नाएपछी पूरा गाउँ र समाज नै आतंक फैलाउनु सक्छ। त्यसैले सावधानी अबस्य अपनाउनुपर्छ।
विश्वमा यो ५ महिनाको अबधी मा साढे तिन लाख भन्दा बढी कोरनाको कारणबाट मृत्युवरण भएको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसैले कोरानाको कारण मृत्युहुदैन भन्नू नि मुर्खता नै हुन्छ। तर अर्को सत्यता पनि छ जुन हामीहरुसँग लुकाइएको छ वा देखाईएको छैन र केहि कुरा हामीलाई बढी देखाईएको छ। हामीले देखाईएको कुरालाई हामीले निकै हेरिरहेका छौं र एकअर्को सामु सेयर नि गरिरहेका छौं ।जुन डरलाग्दो नि छ ।
तर ,नदेखिएको कुरा खोज्न कसैले प्रयास नै गरेका छैनौं। कसैले गरेपनी त्यसलाइ खासै वस्ता नि राख्दैनौ अरुसामु सेयर नि गर्दैनौ किनकी हामी डरलाग्दो र नकारात्मक कुरामा बढी ध्यान दिन्छौं । राम्रो र सकारात्मक कुरा आफै त्यो नराम्रो हल्ला सँग दबेरै जान्छ । यो नै विश्व समाजको सत्यता हो। कोरना को डर त्रासले हामी जेलमा बसेको कैदी जस्तै घर भित्रै बस्न तयार छौं । यो सँग लड्ने साहस र सत्यता खोज्ने कोशिस नै गर्दैनौं। कोरनासंगै लुकेको सत्यता के त ? ती साढे तीन लाख मर्ने कोरनाकै कारण मात्र मरेका हुन त ? यदि कोराेना कै कारण मरेको होईन भने अरु के के कारण थियो त मर्नु मा ? र, कस्ता ब्यक्ति मरे त ? यो बारेमा बुझ्ने कि ?
कुनै एक बिरामी मुटुको समस्याले गार्‍हो भएर अस्पताल भर्ना भएपछि ज्यान गयो पछि थाहा भयो उसमा कोराेना नि पाेजेटिभ भयाे । उसकाे मृत्युकाे कारण मुटु रोग होइन कोराेना देखाइयो।
काेराेना संक्रमणका कारण मर्ने मध्येमा ९० देखी ९५ प्रतिशत ६० बर्ष माथिका नै छन् जो निकै कमजाेर र दीर्घकालिन रोग जस्तै दम, मधुमेह, मुटुरोगी, अटोईम्युन रोगले ग्रसित थिए जस्लाई कुनै पनि सामान्य फ्लू भए पनि बाच्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब त्यस्ता बिरामीलाइ पनि काेराेना पाेजेटिभ देखिएका कारणले केबल कोराेना कै कारण मुत्यु भएकाे भनियो।
जस्तो कि म उदाहरण दिन्छु । कुनै एक बिरामी मुटुको समस्याले गार्‍हो भएर अस्पताल भर्ना भएपछि ज्यान गयो पछि थाहा भयो उसमा कोराेना नि पाेजेटिभ भयाे । उसकाे मृत्युकाे कारण मुटु रोग होइन कोराेना देखाइयो। कमसेकम मर्नेलाई के के रोग थियो यो यो कारणले मर्यो भनेर देखाउन पर्छ की पर्दैन ?
अर्को उदाहरण एक जना बिरामी कलेजोको समस्याले भर्ना हुनु भयो सोही कारणले मृत्यु भयो तर उहाँमा कोरना पाेजेटिभ रैछ । उहाँ नि अब कोराेनाको कारण मृत्युवरण हुने तथ्यांक मा पर्नु भयो । WHO लगाएत अन्य संस्थाले केवल कोराेना मात्रले मरेको देखाउने कि नदेखाउने ? कोरणाले मर्नेहरुमा यती जना जो कुनै रोग थिएन केबल कोरना मात्र मरेको भनेर देखाउने कि नदेखाउने ? यो किन लुकाएको होला ? यदि त्यसाे गरियो भने त मानिसलाई डर त्रास हुदैन किनकी कोराेनाको कारण मात्र मर्ने संख्या त धेरै न्यून छ।
सायद हजार मै आउला । त्यसपछि को डराउने ? मानिसलाई मर्ने त्रास र डर नै हुने भएन। अनि को सँग गर्ने यो डर को ब्यापार , सबैभन्दा सजिलो ब्यापार र नै मृत्यु डरकाे छ। बाच्नको लागि मानिसले जे पनि गर्छ , सबै सम्पती समेत लुटाउछ। यो त केही होइन । त्यसैले त मानव स्वस्थमाथि ब्यापार गर्नेहरु पनि मृत्यु डरको ब्यापार गर्न पछि पर्दैनन। अनि सत्यता पनि यहि हो।
अहिले डर त्रासले अस्पतालमा रुघाखोकी र सामान्य ज्वराे र फ्लू आएको रोगीलाई उपचार नगरेको अवस्था छ। र, अहिले विश्व नै डरको ब्यापार गरिरहेको छ। धनी देशले गरिब देश सँग डरको ब्यापार गरिरहेका छ । यदि डर पैदा भएन भने कस्ले गर्छ टेस्ट अनि टेस्ट कीटको ब्यापार ? मास्क लगायत सेनिटाईजरको ब्यापार ? मृत्युकाे संख्या बढाउनमा यस्तै व्यापारीकाे हात त छैन ?
कति त कोराेना को डर ले हामफालेर मरेको खबर नि नसुनेको होइन। भन्छन नि वनको बाघले खाला नखाला मनको बाघले खान्छ।
अब कोरना बिरामीलाई गरिरहेको उपचार बारेमा चर्चा गरौं । उपचार तिनैकाे गरिरहेको छ जो समान्य फ्लूको लागि गरिन्छ । एन्टि भाईरल, एन्टी प्यैरिटिक (जोरो को लागि) र लक्षणको आधारमा अन्य केही औषधि। हल्ला ठुलो उपचार उहीँ सामान्य फ्लूको जस्तो। फेरि निको हुनेहरु यहि सामान्य औषधिले नै भएको छ। कतिपय बिना औषधि नै आफैँ निको हुनु भएको छ ? र, नहुने जे गर्दा नि निको भएको छैन । के कोराेना साँचिकै खतरा रैछ त ?
आखिर बिना औषधि ठिक हुने कसरी हुनु भयो होला ? अवश्य पनि प्रतिरक्षा प्रणाली नै होला । जो हरेक रोग सँग लड्ने ढाल हाम्रो आफ्नै शरीरमा छ। यसरी हेर्दा त कोराेना त्यस्ताे ज्यान लिने खालको त देखिएन त ? फेरि मृत्यु कसरी भयो त ? डर ,त्रास अहिले कोराेना भन्ने वित्तिकै यति खतरा मान्छौ कि कोराेना लागे पछि मरिहाल्निछ भन्ने साेच हामीकहाँ छ । कति त कोराेना को डर ले हामफालेर मरेको खबर नि नसुनेको होइन। भन्छन नि वनको बाघले खाला नखाला मनको बाघले खान्छ। त्यसैगरी धेरैलाई कोरानको डरले नि खाएको हुन पर्छ।
जुन हामीहरुले सामान्य मानिसमा पैदा गर्देका छौं । र, अर्को कतै गरिरहेका उपचारले त होईन ? जुन पनि उपचार गरिरहेको छ परिक्षण मै गरिरहेको छ। सहि उपचार कसैलाई नि थाहा नभएको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि केही अघिसम्म कोरनाको लागि दिएको औषधि hydroxychloroquine र chloroquine लनसेट मेडिकल जर्नल ले गरेको अध्ययनले कुनै फाईदा नहुने बरु उल्टै मुटुमा समस्या हुने देखाए पछि बन्द गरियो। के मानिस औषधि परिक्षणको लागि बनेको हो त? कतै यो कोराेनाको औषधि र भ्याक्सिन पत्ता लगाउन गरेको मार्केटिङ त हाेइन ?
शंका यतातिर नि जान्छ किन जान्छ फेरि चर्चा गरौं । हरेक बर्ष करीब ५,६ लाख मानिस फ्लू अथवा इन्फ्लुएञ्जा लाइक इल्नेस जस्लाई ” ILI” नि भन्छौं मर्ने गरेको तथ्यांकहरु छ्न। हरेक बर्ष यति नै मर्थे । फरक त्यति हो, त्यतिखेर न कोराेना चेक गर्ने टेस्ट कीट नै नभएको अवस्था थियो । वा उपलब्ध थिएन। सायद यो भन्दा अघि नि कोराेना कै कारण नि मरेको हुन सक्छ । तर त्यतिखेर मर्नेको तथ्यांक कि त निमोनिया, कि दम, कि मुटु रोग कि आई एल आईमा आउथ्यो।
कोराेना जस्तो केवल एउटा रोगमा आउदैन थियो। मानिस मर्थे सामान्यरुपमा हेरिन्थ्यो। तर फ्लू को कारण मर्थे ४,५ लाख नै। तर अहिले टेस्ट कीट बनाईयो रोग पत्ता लगाईयो र केबल यस्को कारण मरेको देखाईयो अनि डर सृजना गरियो। त्यतिखेर सामान्य फ्लु रुघाखोकी भनिन्थ्यो सामान्य औसधि दिईन्थ्यो कति घर मै तातोपानी र घरेलु उपचार गरेर निको हुन्थे । सामान्यरुपमा हेरिन्थ्यो र मर्ने मान्छे मर्थे नै । कारण श्वासप्रश्वासकाे समस्या मानिथ्यो। हरेक बर्ष बढ्दै छ यस्तै फ्लू भएर मर्ने कारण पनि त्यसैले अहिले कोराेनाले भर्खर ४ लाख पुग्न थाल्यो अझै ५,६ लाख त हुनै बाकी छ।
कोराेना कत्तिकाे खतरा छ भन्ने कुरा काेराेना जितेका बिरामीकाे अनुभवबाट हामीले थाहा पाउँछाै ।
यो बर्ष १० लाख पुगे पनि कुनै पनि आश्चर्य चकित मान्नु पर्ने देख्दैन म किनकी अहिले मर्ने कारण अरु भए नि कोराेना कै तथ्यांकमा आएको छ । विस्वभर कुल मर्ने संख्या घटेको अवस्था छ भने कोरानबाट मर्ने साढे तीन लाख नाघेको छ तापनि कुल मर्ने संख्या घटेको छ, कम मानिस मरेका छन् । यो कुरामा त खुसी नि हुनु पर्ने देख्छु म। त्यसैले के प्रष्ट हुन्छ भने कोराेना भन्दा खतरा त अन्य धेरै छन । कोराेना लागेर मान्छे धेरै बाचेका छन तर अरु रोग लाग्ने मान्छे बाच्न गाह्राे छ ।
मान्नुस नमान्नुस कोराेना त केवल बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम मात्र गरेकाे हो। यो हामी स्वयम् हुनबाट कम गर्न सक्छौं । त्यस्काे लागि स्वस्थ जीवनशैली राम्रो आहार र योग कसरत नै हो जस्ले कोराेना मात्र नभएर अरु रोग सँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउछ। कोराेना लागेर मर्ने जे गर्दा नि मरेकै छन र बाच्ने सामान्य औषधि र उपचारले नै ठिक छैन जति हामीलाई देखाईएको छ ।
खतरा त्यसलाइ छ जो अस्वस्थ जीवनशैली अप्नाएर पहिलैदेखि रोग पालेर बसेका छन् । त्यसैले डर त्रास नभएर लड्न जरुरी छ। नाबालक, बुढाबुढी र बिरामीहरुका लागि भएनी सावधानी अप्नाउ मुख्य त सामाजिक दुरी कायम गरौँ । कोराेना कत्तिकाे खतरा छ भन्ने कुरा काेराेना जितेका बिरामीकाे अनुभवबाट हामीले थाहा पाउँछाै ।
परीक्षा तालिका आउन लाग्यो, पाठ्यक्रम आएन
चाडपर्वमा बालबालिकालाई कसरी खुसी बनाउने ?
सरकारले न्याय गरेको दिन..‍.
महामारीमा स्थानीय सरकार र शिक्षा
नगरप्रमुख पाण्डे र उपप्रधानमन्त्री पोख्रेल बीच संवाद, दाङ्गमा अक्सिजन आपूर्ति सहज हुने
तुलसीपुरमा अक्सिजन दिन र लिन अक्सिजन बैक, यी नम्बरमा फाेन गर्नुहाेस्
मृतक बालकहरुकाे सनाखत, गाडी मालिक र चालक नियन्त्रणमा
घरमै आइसोलेसनमा बस्दा श्वास फेर्न गाह्रो भए यसाे गर्नुहाेस
प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष- लक भएपछि निसास्सिएर मृत्यु भयो
फेरी सरकार बनाउँन मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा
मल्टिपल मिडिया प्राली
तुलसीपुर ५, दाङ
सम्पर्क: ९८५७८२२५९१ विज्ञापन: ०८२-५२३१५० लेख रचनाका लागि: khabarshala.com@gmail.com समाचारका लागि: news.khabarshala@gmail.com
© 2020 Khabarshala. All Rights Reserved.